I-Bay Tree Cottage - I-Airbnb
I-Bay Tree Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEmma And Richard
UEmma And Richard yi-Superhost
IBay Tree Cottage likhaya lakho kude nekhaya. Le ndlu ka-1889 igcwele isimilo, Indlu ihonjiswe kakuhle ukwamkela iindwendwe zayo ezintsha. Ibekwe entliziyweni yeDeloraine kunye neengcango ezintathu ukusuka eDeloraines eyona cafe kunye nedeli. Ivenkile enkulu yasekhaya iyindawo nje ekude kuzo zonke iimfuno zakho zegrosari okanye ujonge iindawo zokutyela zaseDeloraine. Ngaphesheya kwendlela liziko lolwazi kunye nemyuziyam enabasebenzi abanobuhlobo ukukunceda ngeemfuno zakho zokuhamba.
Ibekwe kwidolophu enqabileyo yaseDeloraine le ndlu incinci ifanelekile kuhambo losapho okanye ukubaleka kwezothando. I-Bay Tree Cottage inamagumbi okulala amathathu alala abantu aba-5 kunye nesisa, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neendawo zokuhlala ezimemayo. Uya kukufumanisa kunzima ukushiya le ndlu intle yembali. Sigcine i-pantry esisiseko ukunceda ngeemfuno zakho zokupheka. Kukho indawo yokuhlamba impahla ecaleni kwendlu ukwenzela ukuba ube lula.
Nceda uqaphele ukuba i-cottage isembindini wedolophu ngoko kukho ingxolo yezithuthi kwaye indlu ineminyaka eyi-130 kwaye ngenxa yoko inee-quirks, njengokuba imigangatho ayikho flat, kodwa ezi zinto zincinci zinika umtsalane. kunye nomlinganiswa.
I-Deloraine yaziwa ngekofu yayo, ukutya, iigalari zasekhaya kunye nemisebenzi yezandla. Kufuphi nezidiliya, idistilleries, iifama zeentlanzi kunye neMole Creek Caves entle kunye neLiffey Falls zenza iDeloraine ibe yeyona holide yangaphandle egqibeleleyo okanye iparadesi yabathandi bokutya. Sime ngokugqibeleleyo ekufikeleleni kwi-Agfest kunye neDeloraine Craft Fair
4.86 · Izimvo eziyi-180
Umbuki zindwendwe ngu- Emma And Richard
Inombolo yomthetho: pa/20/0076